के प्रधानमन्त्रीले आज सार्वजनिक गरेको कविता २०१९ मा अर्कैले रचेको थियो ? « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
प्रकाशित मिति : २०७७, २० बैशाख शनिबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मे दिवसका दिन रचेको ‘अब आँसु खसाउनु पर्दैन’ शीर्षकको कविता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भयो। तर शुक्रबार राति एक्कासी प्रधानमन्त्री ओलीको सो कविता अरुबाट नै कपि गरिएको आरोप पनि सामाजिक सञ्जालमा देखियो। भर्खरै धरौटीमा थुनामुक्त भएका भाइरल पूर्व सचिव भीम उपाध्यायले यसलाई भाइरल बनाए। उनी मात्र हैन, फेसबुक र ट्विटरमा अरु थुप्रैले प्रधानमन्त्रीको कविता अरुबाट कपि गरिएको आसयका स्टायटस र ट्विट पोस्ट गरे। के हो त यसको सत्य? हामीले फ्याक्टचेक गरेका छौँ ।
सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा भीम उपाध्याय लगायत अरुले पनि यो कविता चोरी भएको बारे लेखेका छन् ।
नाम चलेकै व्यक्तिहरुले पनि यसबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखे- अर्काइभ लिङ्क
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कविता आफूले पहिले नै रचेको दावी गर्ने आर.पी गौतम आगो हुन्। उनले आइतबार राति नौ बजेतिर ६ महिना पहिले आफूले कविता रचेको भन्दै ‘कपिराइट गर्छु’ भनेर रोमन र देवनागरीमा दुई वटा स्टायटस पनि लेखेका थिए ।
पोस्ट (वा स्टायटस) सम्पादन गर्न दायाँ छेउमा भएको तीन वटा थोप्लोमा क्लिक गरी Edit Post लेखिएकोमा क्लिक गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी सम्पादन गरिएको/नगरिएको थाहा पाउन View Edit History मा क्लिक गरी हेर्न सकिन्छ। सम्बन्धित पोस्ट ज-जसले देख्छन्, उसले Edit history पनि हेर्न मिल्ने बनाइएको हुन्छ ।